Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe 140 gahe - NuuralHudaa
Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe 140 gahe
Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 1,758 geggeesseen, nama shan irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vayirasichaan qabamuu mirkanaayee 140 gahee jira.
Namoota shanan jidduu sadi dargaggoota lammiilee Ityoophiyaa umriin isaanii 20, 23 fi 24 tahaniifi dhiheenya kana Puntland-Somaaliyaa irraa deebi’uun, iddoo tursiisaa magaalaa Jigjigaa keessatti hordoffiin godhamaafii ture tahuu ibsame. Haaluma walfakkaatuun namni 4ffaatis lammii Siwiidin hidda dhaloota Ityoophiyaa qabu, kan magaalaa Finfinnee keessatti hordoffiin fayyaa godhamaafii ture yoo tahu, namni shanaffaa vayirasichi irratti argame ammoo jiraataa magaalaa Bahir Daar yoo ta’u, nama kanaan dura vayirasichaan qabame waliin walitti dhufeenya kan qabu tahuus gabaasni ministeera fayyaa ni mul’isa.
Haaluma walfakkaatuun guyyaa kaleessaa qorannoo laabraatorii samuudaa iddoo gara garaatii fudhatame irratti geggeeffameen, dubartii jiraattuu naannoo Kibbaa Godina Silxee takkaafi, Jiraataa Magaalaa Baatuu, Finfinnee keessatti Yaala birootiif Hospitaala ciisee jiru tokko irratti vayirasichi argamuu gabaafame.
Itoophiyaan lakkoofsa namoota qorattuu guyyaa guyyaan dabalaa kan jirtu yoo ta’u, kan har’aa kun isa guddaadha. Walumaa galatti hanga guyyaa har’aatti qorannoon labraatorii 24,088 kan gaggeeffame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Gama biraatiin ammoo lakkoofsi namoota vayirasicha irraa bayyanataniitis 75 gahuu ibsame.
October 16, 2021 sa;aa 5:42 pm Update tahe